Ihe ojoo di njo a bia ... | Martech Zone
Tuzdee, Machị 11, 2008 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
You nwetụla mgbe i chere na ọ dị ihe ga-eme eme n’ezie?
Nseta ihuenyo nke Vista banyere Run na m MacBookPro na Ndekota 3.0 na OSX agụ owuru.
Tags: androidapụlKaadi ekeresimesiNdị ọrụ nlekọta ndị ahịaegwuregwu mgbasa ozimobile ad n'elu ikpo okwumobile ngwa mgbasa oziServiceStructure
Vidio: Understandghọta Twitter
DOUG !!!!!! Are na-aga ebe gbara ọchịchịrị !!!!! 😉
Ga-etinye akara fom m klaasị m Bekee na post blọgụ - nka! (Macbeth bu otu ihe ojoo ojoo m gwara ya.)
Ka o sina dị, enwere m obi abụọ na Aero Glass ga-arụ ọrụ n'okpuru VM gburugburu - mezie m ma ọ bụrụ na m mejọrọ.
Aghota na-ekwe nkwa ịhapụ n'oge emesịrị n'afọ a nke na-akwado Aero! Maka ugbu a, mba agala.
Kedu ihe kpatara ị ga-eji weda ezi udo gị nke igwe na oke ụjọ ihere!!?!
Kasị njọ.OS.EVAR !!!
Ekwesịrị m inwe XP na Ndekota m.
Ekwenyesiri m ike na m masịrị Vista karịrị Windows 3.11, Windows 95 na Windows ME. Kpọọ m onye sabo, mana m nwere mmasị na Vista - anyị nwere ya na sistemụ mega nke nwa m nwoke na Aero dị egwu. OS bu kwa ihe siri ike, anyi enwebeghi nsogbu.
Enwebeghị m okwu ọ bụla na Vista. Ahụghị m ihe nsogbu niile a na-eme.
Afọ ole na ole gara aga, akwụsịrị m inwe nsogbu na Windows XP. Ọ were naanị a dị mfe fix; na-ewepu plọg ike ma zoo igbe ntụ ntụ jọrọ njọ na akuku. Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị.
Tupu x-mas achọrọ m ịnwale mmemme nke na-arụ ọrụ na Windo. Mgbe ihe dị ka awa 8 nke idozi ahụhụ, na-anwa ịwụnye WinXP, a nabatara m na mmemme mmemme dị iche iche, na m hapụrụ ọrụ ahụ dum, ma jiri obi ụtọ kwụọ ụgwọ nnukwu maka mmemme Mac nke na-arụ ọrụ n'ezie.
Oops, njikọ ezighi ezi. Nke a bụ nke m chọrọ iziga: